Afhayeenkii hore ee ururka Al Shabaab, Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur ayaa maanta si cad waxa uu u sheegay inuu ka baxay Ururka Al Shabaab, muddo laga joogo Shan Sano iyo Todobo bilood, uuna ku noolaa Gobolka Bakool.
Ex Al Shabaab Roobow, oo sida muuqatay akhrinaayay warqad qoraal ah oo laga soo shaqeeyay, laguna qoray hadalo aad loo soo tifaftiray ayaa wuxuu si aad ah ugu mahad celiyay Dowladda Soomaaliya iyo Beesha Caalamka.
Abuu Mansuur ayaa sheegay in Shabaabku ay isku dayeen inay qaarijiyaan, balse uu iska difaacay, isaga oo intaasi hadalkiisa ku daray inuu hadda Dowladda Soomaaliya wada hadal kula jiro, uuna marti ku yahay Magaalada Muqdisho.
Sheekh Mukhtaar ayaa Axaddii la soo dhaafay soo gaaray magaalada Muqdisho, kaddib markii lagu soo wareejiyay gacanta dowladda, wuxuuna sheegay in wixii maanta ka danbeeya uu ka shaqeyn doono Nabadda.
Ururka Al Shabaab ayaa dhawaan Mukhtaar Roobow weerar culus ku qaaday xilli u ku sugnaa deegaanka Abal oo ka tirsan Gobolka Bakool, isagoo markii danbe gurmad ka helay ciidamada dowladda Federaalka, kuwaasi oo ku guuleystay inay ka badbaadiyaan weerarki lagu qaarajin rabay.
August 16, 2017 Geesey